Ma waxaa la joogaa xilligii Sokorta loo arki lahaa in ay sigaarka la mid tahay? - BBC News Somali
Ma waxaa la joogaa xilligii Sokorta loo arki lahaa in ay sigaarka la mid tahay?
6 Juunyo 2019
Tobonnaankii sano ee ugu dambeeyay cabbidda Sigaarka ayaa noqotay mid hoos loo dhigay waxaana dadka cabba ay la kulmaan takoor.
Laga soo billaabo mamnuucidii 2007dii iyo soo saaridii ahayd in lagu dul qoro farriimo iyo sawiro digniino muujinaya, wax walba waa la sameeyay si dadka looga niyad jabiyo in ay sigaarka cabbaan.
Waxaa jiro calaamado muujinaya in Sokorta ay imika booskaasi galayso marka laga hadlayo halista.
Cabbitaannadda sokorta leh ayaa mar hore canshuuro lagu soo rogay waxayna imika khubarada soo jeedinayaan in nac-naca iyo cabitaannada sokorta leh lagu soo daro digniino ala mid ah kuwa sigaarka, waa marka laga eego sida xad dhaafka ah ee ay dadka u isticmaalaan waxyaabaha Sokorta leh.
Isku celcelis ahaan qofka dhalinyarada ah waxa uu cabbaa saddex jibaar ka badan inta ay dhakhaatiirtu ku taliyeen.
Baaqan waxaa lagu shaaciyay warbixin uu soo saaray machadka cilmi-baaridda ee (IPPR).
Agaasimaha machadkan, Tom Kibasi, ayaa rumaysan in arrintan isbadal lagu samayn karo.
"Baakadaha ay ku qoran yihiin calaamadaha digniinta waxay gacan naga siinaysaan in aan go'aan wanaagsan qaadano oo aana yareyno," ayuu yiri.
Tom ayaa sidoo kale doonaya in la qaado tallaabooyiin kale oo ay ka mid tahay in la mamnuuco xayiisiinta cunnooyiinka fudud.
Cayilka haweenku miyuu sababaa cudurka Kansarka?
Wax ka ogow dilaaga daahsoon ee caalamka
Arrintan waa mid ay mar hore eegeen golaha wasiiradda dalka UK.
Balse in baakadaha lagu dul qoro digniino ma tallaabo xagjir ahaa?
Image caption Baakadaha Sigaarka oo lagu qoray digniino
Shirkadaha Sokorta ayaa tallaabadan ka soo horjeeda
Warshadaha sokorta ayaa isla markiiba diiday, iyadoo ururka cunnooyiinka iyo cabitaanada ay ku doodeen in naqshadeynta ay tahay mid ka soo horjeeda "xorriyada ganacsiga" iyo "iney muhiim u tahay tartanka".
Isla doodaas ayay soo bandhigeen shirkadaha Sigaarka, balse dowladihii is xigxigay ee UK ayaa wali u muuqda kuwa sii adkaynaya sharciga.
Waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah in dowladda aysan meesha ka saarin fikirka ah in waxyaabaha Sokorta ka sameysan ay noqdaan kuwa ku jira Baakado ay digniino ku dul qoran yihiin.
Taa badalkeeda waxay waaxda caafimaadka ay sheegtay in ay ka war sugayso jawaabta uu bixiyo maadaxa caafimadka England, Prof Dame Sally Davies.
Maxay tahay Sababta? Waxaa jirto xaqiiqada ah in loo baahan yahay in la qaado tallaaboyiin adag haddii la doonayo in uu taabagal noqdo hadafka ah in hoos loo dhigo caruurta maasiinkoodu culus yahay marka la gaaro sannadka 2030.
Dame Sally ayaa soo jeedisay in dib u eegis lagu sameeyo tallaabooyiinka la qaaday.
Maadaxa caafimadka England, Prof Dame Sally Davies ayaa qabta in loo baahan yahay in la kordhiyo canshuurta cabitaanada sokorta leh.
Balse waxa cadaatay sannadihii ugu dambeeyay in waxyaabaha aan suuragal ahayn ay dhici karaan.
Dadka u ololeeya caafimaadka ayaa markii hore u ololeyay in la mamnuuco in sigaarka lagu cabo goobaha ay dadka isugu yimaadaan.
Balse markii dambe tallaabooyiinkaas waa lagu guulaystay.